बलिउडको नातावाद:सुशान्तको आत्महत्याको कारण के हो त? « Kalinchowk Online – Nepal's Leading News Portal
बलिउडको नातावाद:सुशान्तको आत्महत्याको कारण के हो त?
जम्मा पढिएको : 315
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७७, शुक्रबार २०:१५
गोपाल ढकाल,(मनोविद)बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या पछि बलिउडमा हुने गरेको नातावाद र सिण्डिकेटको बिषयलाई लिएर चर्को बहस शुरु भएको छ।मुम्बईमा ठूलो सिन्डिकेट चलिरहेको छ। त्यहाँ नातावाद हावी छ। सुशान्तलाई बहिष्कार गर्ने वा फिल्मबाट निकाल्ने निर्माताहरूविरुद्ध आत्महत्याका लागि उक्साएको लगायतका आरोप लगाउन थालिएको छ। सुशान्तले आत्महत्या गर्नु यसैको उपजको रुपमा धेरैले ब्याख्या गर्न थालेका छन्।
पेशाको हिसावले पनि व्यक्तिहरुमा आत्महत्याको जोखिम बढी हुन्छ। तनावपूर्ण पेशा अंगाल्ने व्यक्ति अरु पेसामा भन्दा आत्महत्याको जोखिम बढी हुन्छ।फिल्म वा कलाकारिता पेशा पनि तनावपूर्ण पेशा हो। यो पेशामा स्थापित हुन धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ।